Bangiyada Ustaraaliya Ayaa Wax Ku Dhaawici Doona Macaamiisha Apple Pay | Wararka IPhone
Apple waxay maanta soo bandhigtay bandhig ay u sameysay Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), waxayna ku doodeysaa taas Codsiga saddexda bangi ee waaweyn ee Australiya si ay si wada jir ah uga wada xaajoodaan isticmaalka Apple Pay wuxuu ugu dambeyntii dhaawac ku yahay macaamiisha, maxaa yeelay waxay dhaawici doontaa hal-abuurnimada lacag-bixinta moobiilka oo waxay ka fogaan doontaa firfircoonida tartan ee isticmaalka macaamiisha.
Shirkadda Cupertino waxay ku adkeysanaysaa in mid kasta oo ka mid ah saddexda bangi ee waaweyn (Commonwealth Bank, National Australia Bank (NAB) iyo Westpac) ay si adag isaga caabiyeen ballanqaadka Apple ee ku saabsan Apple Pay labadii sano ee la soo dhaafay.
Apple ayaa ku andacooday in waxay isku dayeen, kuma guuleysan, inay la xaajoodaan bangiyada oo dhanMarka laga reebo mid ka mid bangiyada diiday inuu saxiixo heshiis qarsoodi ah oo u oggolaanaya Apple inay u dirto shuruudaha ugu horreeya macaamiisha. Apple waxay sheegaysaa in gorgortanka wadajirka ahi uu gaabin doono wadaxaajood dheeraad ah oo lala galo hay'adaha kale.
Tani waxay ka dhigan tahay in bangiyada midkoodna uusan ka baqaynin tartamayaashooda bixiya Apple Pay. Sidaa darteed, bangiyadu kama baqayaan khasaare ka yimaada macaamiisha hay'adda. Tani waxay dhaawaceysaa macaamiisha, ka hortagga firfircoonida tartanka, sida ay sheegtay Apple.
Qiyaasta ayaa sidoo kale dhaawici doonta hal-abuurnimada lacagaha mobilada, Ka saarida dhiirigelinta ciyaartoydii horey uga jiray Australia si ay ula tartamaan Apple Pay. Si kastaba ha noqotee, afhayeen u hadlay bangiyada ayaa sidaas u sheegay AppleInsider in, oo ay weheliyaan ganacsatada Australiyaanka ah iyo kuwa lacag bixinta ku shaqeeya, ka shaqeynayey lacag-bixinnada aan lala xiriirin ka hor inta aan la soo bandhigin Apple Pay.
Bangiyadu waxay yiraahdaan, si ka duwan Android ama Samsung, Apple ayaa xannibaysa helitaanka lacagaha NFC oo waxaad dooneysaa in isticmaaleyaashu aysan haysan ikhtiyaar aan ka ahayn inay isticmaalaan Apple Pay. Waxay rabaan inay la xaajoodaan Apple si ay u bixiyaan boorsooyin kale oo isku dhafan oo ku dhex jira Apple Pay. Toddobaadkii la soo dhaafay, tafaariiqleyda Australiya iyo kuwa ka shaqeeya lacag-bixinta waxay la safteen bangiyada si ay si wada jir ah uga gorgortamaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple Ayaa Sheegtay In Bangiyada Australia Ay Ku Waxyeelloobaan Macaamiisha Apple Pay